Martyrs' Day of Myanmar - Yangon Thu Michelle Video
Places and landmarks, Video Jul 19, 2018
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည်ရဲဘော်တွေကျဆုံးခဲ့တဲ့ အထိမ်းအမှတ် အာဇာနည်နေ့ (martyrs’ day of myanmar) ကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့တုန်းက သူကျင်လည်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့တယ်။ ပထမဆုံးသွားခဲ့တဲ့နေရာက ဗိုလ်ချုပ်တက္ကသိုလ်တက်တုန်းက နေခဲ့တဲ့ ပဲခူးဆောင်။ ၁၉၃၃ ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားဘဝတုန်းက ပဲခူးဆောင် ပထမထပ် အခန်း(၁၀၉)မှာနေခဲ့တယ်။ ၁၉၃၅ ဘီအေစီနီယာတန်းရောက်မှ အခုဗီဒီယိုထဲက အခန်း(၁၁၃)မှာနေခဲ့တာပါ။အဆောင်ဖြစ်ပြီးတခြားအဆောင်နေကျောင်းသားတွေလဲရှိနေတော့အပြင်လူဝင်ကြည့်လို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။
နောက်တစ်နေရာကတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေ ရန်ကုန်ရောက်ရင် လာလေ့ရှိတဲ့ House of Memories Restaurant ပါ။ ဗမာ့လွှတ်လပ်ရေးတပ်မတော်အတွက် ရုံးထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပြီး ရုံးနေရာစုစုပေါင်းလေးနေရာရှိတဲ့အထဲက ကျန်တဲ့သုံးနေရာက ပျောက်သွားပြီး ဒီတစ်နေရာပဲ နောက်ဆုံးကျန်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ စားပွဲ၊ လက်နှိပ်စက်၊ ဝင်စာထွက်စာဖိုင်အကန့်တွေ အခုထိရှိနေသေးတယ်။ Mr.Dina Nath ရဲ့ သားဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလို့ မြင်တွေ့ရတာ။ ကိုလိုနီခေတ်လက်ရာဆောက်ထားတဲ့အိမ်ပုံဆိုတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတာ အမှန်ပဲ။ @House Of Memories Restaurant ကနေ လိပ်စာရှာ၊ reserve တင်လို့ရတယ်နော် …. ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အရိပ်အယောင် အငွေ့အသက်တွေ မြင်ယောင်ခံစားနိုင်ဖို့ သွားရောက်လေ့လာကြည့်ပါဦးလို့ ….
#Yangonthumichelle #michellemayshell #ရန်ကုန်သူမီရှဲ #MartyrsDay
ရိုက်ကူးခွင့်ပေးပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီးညစာကျွေးမွေးပါသော မမီးငယ် House Of Memories Restaurant နဲ့ အဘက်ဘက်မှ မေတ္တာစေတနာနဲ့ ကူညီပေးပါသော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်၊ အစစအရာရာလိုက်လံကူညီစီစဉ်ပေးတဲ့ ဒဿနိကဗေဒ ဌာနမှ ဒေါက်တာ ဝေယံလင်း၊ ဒေါက်တာ ညွန့်ဟန်နှင့် သမိုင်းဌာနမှ ဒေါက်တာ ဇော်လင်းအောင်တို့အား အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ် ….
General Aung San was assassinated in 19 July. As memorial of this day, Yangon Thu Michelle takeavisit to places where he used to be there. When General Aung San was in university and when he work for Bo Tayza.
The university hostel is not allowed outsiders so takeatour with me. But you can enjoy House of memory restaurant.
Martyrs’ Day of Myanmar is also national holiday. On that day, higher ranking government leaders from Myanmar go to visit martyrs’ mausoleum in the morning of this day and pay respect.